RW Khayre oo caawa u dhoofay dalka maraykanka - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > RW Khayre oo caawa u dhoofay dalka maraykanka
October 16, 2019 Duceysane697
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa ka dhoofay magaalada Muqdisho, isagoo ku sii jeeda magaalada Washington ee dalka Maraykanka oo uu uga qayb gelayo shirka sannadlaha ah ee Bangiga adduunka iyo hey’adda lacagta adduunka (IMF).
Ra’iisul Wasaaraha ayaa diyaarad gaar ah ka qaaday Muqdosho, isagoo Transit ku ah magaalada Addis Ababa, halkaasoo caawa saq dhexe uu ka dhoofayo.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa magaalada Washington kaga qeyb galaya Shirka Sannadlaha ah oo looga hadlo horumarrada maaliyadeed, caqabadaha iyo wixii ka hir galay qorshayaashii maaliyadeed ee lagu soo bandhigay shirka guga ayaa waxyaabaha sannadkaan looga hadlayo waxaa kamid ah barnaamijka geedi socodka deyn Cafiska Soomaaliya.
Mr Kheyre ayaa sidoo kale inta uu joogo Washington waxa uu kulamo la yeelanayaa madaxda Bangiga adduunka iyo hey’adda lacagta adduunka oo uu kala hadlayo in Soomaaliya lagu garab siiyo qorshaha deynta looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan soo gaaray.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday ka guul gaaridda qorshaha deynta looga cafinayo dalka ayaa horay ugu guuleysatay shuruudihii ku xirnaa sedaxdii waji ee ugu horreeyay, waxaana hadda si wanaagsan ku socda wajiga afaradaad (SMP4).
Qaar kamida masuuliyiintii ka qayb gashay caleema saarkii axmed madoobe oo Muqdisho dib ugu laabtay
Dowlada oo ciidamo Kumaandoos ah ku kordhisay kuwii horay u joogay Dhuusamareeb